Soo dejisan Norton Security Premium 22.16.2.22 – Vessoft
WindowsAmnigaDifaac guudNorton Security Premium
Bogga rasmiga ah: Norton Security Premium
Norton Security Premium – ilaalinta kombiyuutarka oo dhameystiran shirkadda caanka ah ee Symantec. Software waxay bixisaa difaac aad u fiican oo ka dhan ah xayawaanka, trojans iyo fayrasyada noocyo kala duwan, iyada oo loo marayo module unug oo si dhakhso ah u ogaanaya iyo feylka feylka lagu geliyo karantiilka. Nidaamyada isku dhafan ee Norton Security Premium waxaa ka mid ah tiro koontaroolo ah si loo xalliyo hawlaha ilaalinta si waafaqsan baahiyahaaga. Norton Security Premium wuxuu leeyahay awood badbaado oo anti-spam ah, wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku kaydiso xogta shakhsiyeed ee ku keydsan kaydinta waxayna xannibi kartaa noocyada kala duwan ee khatarta internetka. Ka mid ah sifooyinka dheeraad ah waxaa ku jira nuqulka xogta internetka, naqshadaynta diskka, xakamaynta autorun iyo nadiifinta faylasha ku meel gaarka ah. Norton Security Premium ayaa sidoo kale taageeraya nidaamka xakamaynta waalidka si carruurta looga ilaaliyo saameynta xun ee ilaha internetka aan la rabin.
Xaqiiqo hanjabaad leh
Shaandhaynta anti-spam iyo firewall
Ilaalinta macluumaadka gaarka ah ee internetka
Noocyo fududeynta waxqabadka dheeraadka ah
Soo dejisan Norton Security Premium
Faallo ku saabsan Norton Security Premium
Norton Security Premium Xirfadaha la xiriira